Melite WhatsApp na gam akporo, otu esi enweta ụdị ọhụụ (2021) n'efu | Gam akporosis
Idebe ngwa emelitere na nke kachasị ọhụrụ ha dị mkpa mgbe niile. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọrụ ole na ole na-enyo enyo banyere imelite ngwa ngwa n'ihi nsogbu ọrụ nwere ike. Ndị ọzọ enweghị mmelite ngwa ahụ naanị n'ihi amaghị, yabụ, anyị ga-akụziri gị ihe niile ikwesiri ịma imelite WhatsApp.
N'ezie ị bụ otu n'ime ndị chọrọ wụnye WhatsApp n'efu ozugbo ekwentị dị ọhụụ, ya mere, ọ dị mkpa ịnwe ọhụụ emelitere nke WhatsApp, ọ bụghị naanị n'ihi na anyị na-efu ozi ọma agbakwunyere na ụdị nke ọ bụla, mana n'ihi mmelite ahụ na-ewetakwa akụkọ na ọkwa nchekwa, yana nzuzo dị mkpa, ọkachasị mgbe anyị chọrọ ịchekwa nje na gam akporo dịka ndị gụnyere anyị mgbasa ozi na WhatsApp.
1 Etu esi melite WhatsApp na gam akporo
2 Enweghị m ike imelite WhatsApp
2.1 Enweghị m ike imelite WhatsApp n'ihi enweghị ohere
3 Etu esi eme imelite WhatsApp n’efu
4 Melite WhatsApp Plus
5 Gini mere o ji di mkpa ka emelite WhatsApp?
6 Etu esi melite WhatsApp Web
7 Kedu ka esi bụrụ beta beta ma nwalee ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ?
8 Etu esi melite WhatsApp na APK na-enweghị Google Play
9 Enwere ike ịgbalite mmelite WhatsApp na-akpaghị aka?
Etu esi melite WhatsApp na gam akporo
Ihe ikpe gam akporo yiri nke ahụ, naanị abanye Google Play Lọ ahịa anyị nwere ike imelite ngwa ahụ, ebe ọ bụ na ibe mbụ ga-egosi anyị ngwa ndị nwere mmelite dị na ọ bụ ebe ahụ ka ị nwere ike imelite WhatsApp maka gam akporo.
N'ezie ọ bụ ezie budata whatsapp APK O kwere omume site na isi mmalite ọ bụla, a ga-emelite ya ma ọ bụrụ na anyị wụnye ya.
Enweghị m ike imelite WhatsApp
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na anyị agaghị enwe ike imelite WhatsApp, dabere na ụdị ikpo okwu anyị na-eji. N'ihe banyere gam akporo, anyị ga-agụnye ihe ndị kachasị ewu ewu mere anyị ji nweta a njehie na-emelite Whastapp:
Ọ bụrụ na ị hụ njehie 413, 481, 491, 492, 921, 927 ma ọ bụ 941, Mee ihe ndị a:
Hichapụ akaụntụ Google gị: gaa na Ntọala > Akaụntụ > Google > họrọ akaụntụ gị ma hichapụ ya
Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ iji tinye akaụntụ Google gị ọzọ.
Kpochapụ oghere ngwa: Ntọala> Ngwa> Playlọ Ahịa Google Play> Kọwaa oghere na Clear data.
Enweghị m ike imelite WhatsApp n'ihi enweghị ohere
Ọ bụrụ n’ịhụta njehie 101, 498 ma ọ bụ 910 a maara ya dị ka “Enweghị ohere nchekwa”,, Nke a bụ ihe mbụ ị ga-eme bụ ikpochapụ oghere dị ka anyị gosipụtara na mbụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, ị ga - enweghị nhọrọ kama ihichapụ faịlụ ndị achọtara na ngalaba ndị a n'ime nchekwa ngwaọrụ:
Mpempe vidiyo dị na: / WhatsApp / Media / WhatsApp Videos / Zigara.
Ihe oyiyi foto dị na: / WhatsApp / Media / WhatsApp Images / Zitere.
Olu ozi olu dị na: / WhatsApp / Media / WhatsApp Voice Notes.
Ọzọ nke nkịtị njehie bụ njehie nke "Faịlụ ngwungwu na ezighi ezi ”, maka nke a, anyị ga-ebudata WhatsApp .apk ozugbo site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ahụ, mgbe ahụ, anyị ga-aga na Ntọala gam akporo, ịnyagharịa na "Nche" na ozugbo ahụ, anyị ga-arụ ọrụ "Isi mmalite amaghị". Ugbu a, anyị ga-alaghachi na folda nbudata ma wụnye WhatsApp ọzọ na nsụgharị ọhụrụ ya.
Etu esi eme imelite WhatsApp n’efu
Enweghị nsogbu, usoro ọbụla ị jiri, WhatsApp zuru oke, yabụ echegbula, emeohuru WhatsApp n'efu O nwekwara ike ime, ya mere echegbula maka mmelite ọ bụla, ọrụ WhatsApp ga-enwere onwe ya maka ndụ.
Ya mere, anyị na-echetara gị na ị ga-enyo onye ọ bụla na-eweta nke na-anwa ime ka ị kwụọ ụgwọ maka ndenye aha WhatsApp, ebe anyị nwere ike ikwenye na ngwa ahụ yana ojiji ya bụ n'efu, karịa ịkwụ ụgwọ nye onye ọrụ anyị n'ọnọdụ maka atụmatụ data anyị.
Melite WhatsApp Plus
N'ihe banyere mgbanwe WhatsApp, anyị ga-aga nbudata nke .APK nke Whatsapp Plus inwe ike imeghari ya. Ya mere, iji melite WhatsApp Plus anyị ga-agakwuru ndị na-eweta ya, re-download ụdị ọhụrụ WhatsApp dị na mgbanwe yana soro ntuziaka ndị nrụpụta. N'ime njikọ a, anyị ga-ahụ nsụgharị niile na mmelite ndị kachasị ọhụrụ nke WhatsApp Plus, yabụ anyị ga-ebudata .apk ma wụnye ya ọzọ na WhatsApp Plus etinyeworị.
Obi abụọ adịghị ya, WhatsApp aghọwo ngwa izi ozi ngwa ngwa nke ọtụtụ nde mmadụ na-eji ụbọchị ha kwa ụbọchị, yabụ ọ dị mkpa na ị ga-enwe ike melite WhatsApp gaa na nke kachasị ọhụrụ, n'ihi na nke a ga-enye gị mmelite arụmọrụ, arụmọrụ ọhụrụ ma ga-edozi nsogbu nchekwa nwere ike itinye nzuzo gị n'ihe egwu.
Gini mere o ji di mkpa ka emelite WhatsApp?
Kwa mgbe, WhatsApp emelitere. Ngwa izizi ozi na-ewebata ọtụtụ ndozi, dị ka ọrụ ọhụrụ. Agbanyeghi enwere ike inwe ndozi na arụ ọrụ ma ọ bụ nchekwa. Ya mere, mgbe ụdị ọhụụ ọhụrụ dị, ọ dị mkpa imelite.
E nwere ọtụtụ ihe mere o ji dị mkpa dobe ngwa ahụ ka ọ dị ọhụrụ. N'otu aka, iji nweta ọrụ ọhụụ na mmelite ọ bụla na-abịakwute ya. Ọ bụrụ na ịnaghị emelite, ịnweghị ike ịnụ ụtọ ha. Na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na-enye gị ohere iji WhatsApp mee ihe nke ọma.
N'aka nke ọzọ, dịka anyị siri kwuo, a na-emekwa ka ndozi nchekwa dị. N'ụzọ dị otú a, inwe ụdị ọhụrụ ahụ, ị na-echebe onwe gị megide iyi egwu. N'ihi ya, gị gam akporo ekwentị bụ obere ngwangwa na o kwere omume ọgụ, nje ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iyi egwu nke dị n'oge ahụ. Ngwa ahụ nwere ike ịbụ ọnụ ụzọ ekwentị anyị n'ụdị ọnọdụ ndị a.
Nwere ike imelite WhatsApp si Google Play, na-achọ profaịlụ ngwa ahụ. I nwekwara ike ịchọ mmelite ahụ na ekwentị gam akporo gị, na ngwa ngwa ahụ chọọ ngwa ahụ ma mee ka nyocha ahụ maka mmelite ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmelite na-abụkarị akpaka. Yabụ na ịkwesighi ịme ihe ọ bụla iji nweta ha.
Etu esi melite WhatsApp Web
WhatsApp nwere ụdị nke ya maka kọmputa, kpọọ WhatsApp Web. Dị ka nsụgharị maka smartphones, a na-emelite ya na ọrụ ọhụrụ. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike amaghị etu esi emelite ụdị nke ngwa a.
Nọmalị, mgbe mmelite dị, ị ga-enweta ọkwa. Yabụ ihe dị mma bụ na ị ga-pịa njikọ nke gosipụtara na ihuenyo ahụ. N'ihi ya, ị nwere ohere ịnweta mmelite nke ụdị a. Mana, ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ị anataghị ọkwa a, enwere ụzọ ọzọ, dị mfe ma dịkwa ngwa iji nweta ya.
Ga-abanye na peeji na-esote. Jikọọ ekwentị gị na ya wee mepee ngwa ahụ na ekwentị. Na web ị nweta koodu QR, na ị ga-eji ekwentị gị gụọ ya. Nke a ga-emelite WhatsApp Web ozugbo. Nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọhụrụ ahụ.
Kedu ka esi bụrụ beta beta ma nwalee ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ?
WhatsApp nwere ụdị beta, nke ga - enye gị ohere ịnwale ọrụ ọhụụ ọ bụla na - abịakwute ya tupu onye ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike bụrụ beta tester nke ngwa ahụ. Inwe ike ime ya bụ ihe dị mfe. E nwere ihe ole na ole ị ga-eme.
Mbụ ị ga - abanye na peeji nke WhatsApp Beta, nke ị ga - enweta a njikọ. N'ime, a ga-ajụ gị ịbanye na akaụntụ Google gị. Mgbe ahụ ọ ga-egosi na ihuenyo bọtịnụ na-ekwu "Bụrụ onye nyocha". Ihe ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ ahụ. N’ụzọ dị otu a, ị bụrụlarị nnwale beta.
Mgbe ịmechara nke a, ikwesiri ibudata ụdị ngwa ahụ kachasị dị nso. Gaa na Storelọ Ahịa Play. N'ebe ahụ, na profaịlụ WhatsApp, ị nwere ike ịhụ na ị bụrịrị onye nyocha beta, n'okpuru aha nke ngwa ahụ. Na-eso, melite ngwa na ekwentị gị Gam akporo. Site na usoro ndị a ị bụrịrị onye nyocha beta na ị ga - enwe ike ịnwale ozi ndị a bịara na ngwa izipu ozi.
Etu esi melite WhatsApp na APK na-enweghị Google Play
Nwere ike ịnwe WhatsApp APK, nke ibudatara na mpụga nke Google Play. O kwere omume maka ndị ọrụ ekweghị na ekwentị ha. N'okwu a, usoro nke imelite ngwa ahụ dịtụ iche.
Ebe ọ bụ na anyị enweghị ohere faịlụ na Google Play dị ka ọ dị na mbụ. Luckily, WhatsApp onwe ya na-enyere anyị aka na usoro. Na ibe ya Anyị nwere ngalaba maka gam akporo ngwaọrụ, nke ị nwere ike ịnweta site na njikọ a. Nke a bụ ebe ị nwere ike ibudata ngwa.
Anyị na-ahụ WhatsApp APK, nke kachasị na-adịbeghị anya nke ngwa ahụ. Ya mere, budata faịlụ a na ekwentị gị Android ma gaa n'ihu imelite ya n'ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ochie nke sistemụ arụmọrụ, nke dịka ọmụmaatụ anaghị akwado Google Play, ọ bụ ụzọ kachasị mma. Na mgbakwunye na ịnọ n'udo.
Enwere ike ịgbalite mmelite WhatsApp na-akpaghị aka?
Mgbe ị wụnye WhatsApp na ekwentị gam akporo gị, ngwa ahụ na-abịa na mmelite na-akpaghị aka. O nwere ike ọ gaghị abụ ikpe na nke gị, ma ọ bụ na n'otu oge ị hazie ya n'ụzọ dị iche. Uru nke mmelite akpaka bụ na ịkwesighi ime ihe ọ bụla. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbalite ha, ọ dị mfe.
Tinye ngwa Storelọ Ahịa Play na ekwentị gam akporo gị. Na-esote, gosipụta menu aka ekpe wee banye ngalaba mbụ, nke a na-akpọ "Ngwa m na egwuregwu m”. Ọzọ, site na taabụ elu, pịa arụnyere. Ngwa ị nwere na ekwentị gị ga-egosipụta na ndepụta.
Chọọ na tinye WhatsApp na ndepụta ahụ. Ozugbo n'ime profaịlụ ahụ, pịa na akara ngosi atọ dị na elu aka nri nke ihuenyo ahụ. Mgbe ịme nke a, ọtụtụ nhọrọ ga-egosi n'ihuenyo. Nke ikpeazu bu mmelite akpaka. Y’oburu na square adiro, pinye aka na ebe akara edo gha egosi.
N'ụzọ dị otu a, inwere arụ ọrụ akpaghị aka mmelite nke WhatsApp. Oge ọzọ ngwa ahụ nwere mmelite dị, ị gaghị eme ihe ọ bụla. Ọ ga-imelite na-akpaghị aka.